Chief Information Officer အကြောင်း သိကောင်းစရာအပိုင်း (၁) - ICT Consulting Firm Chief Information Officer အကြောင်း သိကောင်းစရာအပိုင်း (၁) - ICT Consulting Firm
အရင်ဆုံး CIO ရဲ့ Def ကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုရင် CIO ဆိုတာ Organization ရဲ့ အကြီးဆုံး C level တွေထဲကဖြစ်ပြီး ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ org ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ဖြစ်မြောက်အောင် IT strategy, Technology Business Management (TBM) Framework,strategic planning တွေကိုအသုံးချပြီး digitally trending ဖြစ်နေတာတွေနဲ့အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီး details ကျကျဆက်ဆွေးနွေးရအောင်
ဒါဆိုရင် CIO ကဘယ်သူတွေနဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်ရတာလဲ?
Enterprise တော်တော်များများမှာ executive board တခုမှာနေရာယူထားတဲ့ CIO က CEO ကိုတိုက်ရိုက် စကားပြောပိုင်ခွင့် ရှိသလို Report တင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်, CIO က IT department ရဲ့ staffs တွေရဲ့ tasks တွေကို assign ချရပြီး Company ရဲ့ progress အတွက် CMO (Chief Marketing Officer) နဲ့ လည်းအတူတူ အလုပ်တွဲလုပ်ရပါတယ်
CIO ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ရော ဘာအချက်တွေ လိုအပ်မလဲ?
1- ပုံစံကျကျ IT services တွေ IT security တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ PROFICIENCY2- IT staff တယောက်ချင်းစီကို work assign ချနိုင် တဲ့ ABILITY3- Project Management, Budget Management လုပ်န်ိုင်တဲ့ SKILLS4- Customer engagement analysis လုပ်နိုင်တဲ့ ABILITY5- Service Providers, Clients တွေနဲ့ယူထားတဲ့ partnership ကို professional ကျကျ ENGAGEMENT လုပ်နိုင်ဖို့ရယ် စတဲ့ mastery skills များစွာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်Soft Skills တွေနဲ့ဆိုရင် C Level သာမက employees တိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး, teamwork, ကိုယ်ချင်းစာစိတ်, ဟာသညဏ် စတာတွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှသာ ကိုယ့်လုပ်အောက်ငယ်သားတွေက ကိုယ်နဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်ရင်း motivated ပါဖြစ်နေမှာလေ
CIO တွေအနေနဲ့ အမြဲမျက်ချေမပြတ်သိသင့်တဲ့ IT trend တွေကကော?
limit လုပ်ထားတာတော့မရှိပါဘူး, ခြုံငုံပြီးပြောရရင်Service centric application architecture အကြောင်းကို Enterprise level ထိ step by stepဘယ်လို run တယ်, Finance Techology အကြောင်းတွေ Cost Effective ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို detailed သိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက် article တွေမှာလည်း CIO နဲ့ပတ်သက်တာတွေ တင်ပေးမှာမလို့ Page ကိုလည်းအမြဲ စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်